Marketing amin'ny finday: Atosiho ireo varotrao amin'ireto paikady 5 ireto | Martech Zone
Tamin'ny faran'ity taona ity, maherin'ny 80% ny olon-dehibe amerikana no hanana smartphone. Ny fitaovana finday dia manjaka amin'ny tontolon'ny B2B sy B2C ary manjaka eo amin'ny marketing ny fampiasan'izy ireo. Ny zavatra rehetra ataontsika ankehitriny dia manana singa finday amin'izany izay tsy maintsy ampidirintsika amin'ny paikadim-barotra.
Inona no atao hoe Marketing amin'ny finday
Ny marketing amin'ny finday dia marketing amin'ny na miaraka amin'ny fitaovana finday, toy ny telefaona finday. Ny varotra finday dia afaka manome ny mpanjifa fotoana sy toerana misy sensibilité, natao manokana ary viewport nohavaozina fampiroboroboana entana, serivisy ary hevitra.
Ny teknolojia marketing amin'ny finday dia misy ny fandefasan-kafatra an-tsoratra (SMS), fizahana finday, mailaka finday, fandoavam-bola amin'ny finday, dokam-barotra amin'ny finday, varotra finday, haitao tsindrio ary antso finday. Ny marketing ara-tsosialy koa dia manjaka amin'ny sehatry ny marketing amin'ny finday.
Raha tsy tombanana ianao finday-barotra paikady, Eliv8 dia namolavola ity infographic tsotra sy mahery amin'ny toerana ahafahanao (ary tsy maintsy) mitondra varotra amin'ny ezaky ny varotra finday:
Ataovy tsotra ny fiantsoana - Avy amin'ny rindranasa click-to-call mankany miantso rohy voamarina.
Tolotra fanamarinana - Ampiasao ny Yelp, Facebook, Foursquare (Swarm) hampidirina ireo tolotra ho an'ireo olona manamarina sy mahatoky amin'ny toerana fivarotanao.
Fanentanana an-tsoratra sy SMS - Tsy misy zavatra ara-potoana sy mahomby kokoa amin'ny fampidirana mpanjifa… In-8 mahomby kokoa noho ny mailaka rehefa vita ny fanitsiana ny paikadinao SMS.
Inbox finday - Maherin'ny antsasaky ny mailaka rehetra no vakiana (sy voafafa) amin'ny finday. Manome toky ny mailaka dia mamaly amin'ny finday ilaina ny fitaovana.
Finday-Voalohany - Mampiasà paikady voalohany finday. Saika ny antsasaky ny olona rehetra no tsy mety miverina amin'ny tranokalanao raha tsy mandeha amin'ny finday io.
Nanome angon-drakitra sy torohevitra mahasoa izy ireo hanampiana anao amin'ny fampiharana ireo paikady marketing finday ireo:
Tags: jereo-intsindrio hiantsofacebook eo an-toeranaefa-joro sokeranomeraon-telefaona hyperlinkfinday alohaboaty findayfinday-barotrapaikady marketing amin'ny findayantso an-taribymailaka mamaly findaynivangongoYelp